ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
ဒေါ်မိမိဝင်းဘတ် ။ ။ မင်္ဂလာ့ပါရှင်
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် စစ်ဖက် အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို သင်တန်းတွေပေးခဲ့ နှီးနှော်ဖလှယ်ပွဲတွေလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူဆိုတော့ အခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေက လောလောဆယ်ကတော့ စစ်အာဏာသ်ိမ်းတာပေါ့နော်။ နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့ လမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ လုံခြုံရေးတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရမယ်အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ၁၉၈၈ လိုအချိန်တုံးက စစ်တပ်က ပစ်ခတ်လို့ လမ်းမပေါ်မှာ လူတွေသေကြေကြတယ်။ သွေးထွက်သံယိုအကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်တပ်ကို အားလုံးက ဝေဖန်ကြတာတွေရှိတာပေါ့။ အဲဒီတော့ မြန်မာစစ်တပ်က အရာရှိကြီးတွေကော မြန်မာစစ်တပ်ကိုကော အရမ်းကို ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့ အမေရိကန်တပ်မတော်ရဲ့အရာရှိဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် အနေနဲ့ အခုလက်ရှိအခြေအနေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။ ဒါမျိုးတွေ ပစ်ခတ်မှုတွေ သွေးထွက်သံယိုမှုတွေ ပေါ်လာလိမ့်မယ်ထင်လား။
ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်။. ။ ကျမကတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ မဖြစ်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျမတို့စင်တာမှာသင်သွားတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေဟာ အရမ်းပဲတော်တယ်။ လူတော်လူကောင်းတွေ နောက်ပြီး သူတို့တွေဟာ အရမ်းလည်းကြိုးစားတယ်။ သူတို့တွေဟာ နောက်ပြီးနိုင်ငံတော်လည်း ချစ်ကြတာတွေ့ရတယ်။ အခုချိန်မှာက ဒီလက်နက်မရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုကို ပစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကမ္ဘာကြီးက လက်မခံကြတော့ဘူး။ ကျမတို့ရဲ့ အမေရိကန်တင်မကပါဘူး ကမ္ဘာကြီးက Soldier လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် Standard Army, Professional Army Soldier ဆိုလို့ရှိရင် အဲလိုမျိုး Code of Conduct က လုံးဝလုပ်လို့မရဘူး။
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ ဒါကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရမယ်ပေါ့နော် ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် ဒါက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုလို့ရှိရင် စစ်တပ်မှာ ဒီလိုအကြောင်းအရာ ဒီလိုကျင့်ဝတ်တွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတာရှိလဲခင်ဗျာ။ ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ စစ်တပ်က ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိနိုင်တဲ့ရှိလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘယ်လိုတွေများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေရှိလဲ။
ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်။. ။ ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကျမတို့ရဲ့ အမေရိကန်တပ်မတော်က ပြည်ထဲရေးထဲမှာ လုံးဝဝင်စွက်လို့မရဘူး။ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်လာလို့ရှိရင် ပထမဆုံးက ရဲပေါ့နော်။ ရဲမနိုင်လို့ရှိရင် ကျမတို့မှာက National Guard ပြည်စောင့်တပ် ဆိုတာရှိတယ်။ သူတို့တွေက လူထုတွေကို ဘယ်လိုအသေအခြားထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Training ရလာတယ်။ ကျမတို့ စစ်တပ်ကြတော့ အဲလိုမျိုးသင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဥပဒေအရလည်း ပြည်တွင်းထဲမှာ ဘာမှဝင်စွက်လို့မရဘူး။
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ စစ်တပ်ကနေဝင်စွက်မယ်အစားကို ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီး မနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလိုအပ်တဲ့အခါကြရင် National Guard လို့ခေါ်တဲ့ ပြည်နယ်အရံတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ထိန်းသ်ိမ်းပေးရတာပေါ့။ အဲလိုအခြေအနေမျိုးတွေက ဘယ်တုံးကဖြစ်ခဲ့လဲ။ အခုကျနော်တို့နောက်ဆုံးကြားတာကတော့ ဒီဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်တုံးကဆိုလိုရှိရင် တော်တော်အကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ လွှတ်တော်ထဲကို အတင်းဝင်ပြေးတယ်။ ရဲတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပဲ တော်ရုံတန်ရုံခုခံပြီး နောက်ဆုံး အလျှော့ပေးလိုက်လို့ ဝင်စီးခံလိုက်ရတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ National Guard Force မှာတွေ့တယ်။ ဒါပြီးထူးထူးခြားခြားမဖြစ်ဘူးပေါ့။ ဒီ National Guard Force တွေကပဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဒီထက်ပိုပြီးစွက်ဖက်ရတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့လား။
ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်။. ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ ဇန်နဝါရီ ၆ရက်နေ့မှာတောင်မှပဲ သူတို့ရဲ့သေနတ်မသုံးလိုက်ဘူး။ အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြီးအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ နောက်ဆန္ဒပြမှုအကြီးဆုံးတခုက လော့စ်အိန်ဂျလိမြို့မှာ ၁၉၉၂ခုလားမသိဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာလည်းပဲ အမေရိကန်စစ်တပ်က လုံးဝမပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား National Guard ဝင်ပြီး ကူညီပေးတယ်။ အဲဒီမှာဆန္ဒပြတာက လူသိန်းကျော်နဲ့ ဆန္ဒပြတာ။ လူတယောက်ပဲသေသွားတယ်။ စစ်သားက သူကိုတိုက်ခိုက်လို့ ခုခံလိုက်တာ။
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ စစ်တပ်ကတော့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြတာမှာ ထွက်ပြီးစွက်ဖက်တာမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေမှာ နိုင်ငံတကာမှာရှိနေကြတော့ နိုင်ငံတကာကိစ္စတွေမှာ ဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်။ ဟိုးတုံးက ဆိုရင် ဗီယက်နမ်တို့ ၊ နောက်ပြီးတို့ ကိုရီးယားတို့ရှိတယ်။ အခုလတ်တလောမှာဆိုရင် အီရတ် တို့ အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မှာရှိတယ်။ ဒီနေရာမှာဆိုရင် တချို့သတင်းတွေမှာ ကြားရပါတယ်။ အမေရိကန် မရိမ်းတပ်ဖွဲ့တွေက အရပ်သားတွေကိုပစ်လိုက်မိလို့အရေးယူခံရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ အဲလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေက ပြည်တွင်းမှာတော့ ဝင်မစွက်ဖူး၊ ပြည်ပမှာတော့ အရပ်ဖက်ပြည်သူတွေကိုပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အထူးတလည် တားမြစ်ချက်တွေရှိလား၊ အရေးယူမှုတွေရှိလား။
ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် ။ ။ အရေးယူမှုတွေရှိတယ်။ သူတို့ Court Martial စစ်ခုံရုံးတင်ခံရမယ်။ ထောင်ကျတာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ကျမမှတ်မိတာ General Stanley A. McChrystal သူက အီရတ်မှာ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ထဲမှာ ။ အဲဒီမှာသူပြောတာက ပြည်သူလူထု့ကို အကာကွယ်ပေးရမယ်တဲ့။ ကာကွယ်မှ ထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့ သူကအမြဲပြောတယ်။ လက်နက်မရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု့ကို သတ်တာက Immoral Unethical ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမရှိတဲ့ အပြုအမူ လို့ ယူဆတယ်။ ကျမတို့တင်မဟုတ်ပါဘူး။ Standard Army , Professional Army ဆိုရင် မပစ်ရဘူး။ စစ်ဆင်ရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ ပြည်သူလူထု့ရဲ့ ထောက်ခံမှုမရဘူးဆိုရင် ကျမတို့အတွက် ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျမတို့ရဲ့ Operation of Reason ပေါ့နော်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု လေးစားမှု ယုံကြည်မှုက အရမ်းလိုအပ်တယ်။ နိုင်ငံတွင်းသာမက အပြင်သွားလည်း အတူတူပဲ။
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ အဲတော့ ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ပြောတဲ့သဘောကတော့ တကယ်ကို ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ ပြည်ဝတဲ့စစ်တပ်တခုအနေနဲ့က လက်နက်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်မယ်ဆိုရင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို ချိုးဖောက်သလို လူထု့ထောက်ခံမှုမရပဲနဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်။ အမေရိကန်စစ်တပ်အနေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားကိစ္စတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ပျက်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပဲ။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်္ခန်းစာယူစရာဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန်တပ်ဖွဲတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်း မြင်ဖူးတာရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါလေးတွေပြောပြပါလား။
ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် ။. ။ ကိုသန်းလွင်ထွန်း ပြောတဲ့ဟာ Platoon လို့ထင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာအများကြီး။ ကျမတို့ ဗိုလ်လောင်းဘဝကတည်းက အဲဒါကို သင်ရပါတယ်။ The Mỹ Lai massacre ဆိုတာ ၁၉ ၆၈ခုနှစ်မှာ Lieutenant Carry နဲ့သူတပ်စုပေါ့နော် Mỹ Lai ဆိုတဲ့ကျေးရွာလေးကိုဝင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကျေးရွာက သူပုန်ကိုထောက်ပံနေတယ်ကြားလို့ဝင်ခဲ့တယ်။ သွားလိုက်တော့ ကျေးရွာက လက်နက်ကိုင်တွေမဟုတ်ဘူး။ သာမန်လူတွေပဲ။ ဘာမှမတွေခါတော့ အဲဒီလူတွေကို သတ်ကော။ အဲဒီအချိန်မှာ ရဟတ်ယာဉ်က Lieutenant William Calley ကို ထောက်ကူဖို့လာတာ။ အဲဒါကို တွေ့သွားတဲ့အခါ Lieutenant William Calley မပစ်အောင် လိုက်တားတယ်။ မသေတဲ့သူတွေကို ကူညီပြီးတော့ တခြားနေရာကို ရောက်အောက် ကူညီပေးလိုက်တယ်။ ပြီးလည်း ပြီးရော Lieutenant William Calley ကိုသွားတိုင်လိုက်တယ်။ Lieutenant William Calley သူတပ်သား ၂၅ ယောက်လုံး စစ်ခုံရုံးတင်ထောင်ကျကုန်တယ်။
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ စစ်ခုံရုံးတင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် ။ ဆင်ခြေပေါ့။ စစ်တပ်ဆိုတာအမိန့်နဲ့လုပ်ခဲ့ကြတော့ ဆင်ခြေတွေ အမိန့်တွေပြောစရာရှိတယ်လေ။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုစစ်မြေပြင် အရေးပေါ်ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် အောက်ခြေကနေလိုက်နာပြီးတော့ ပစ်ဆိုလည်းပစ်ရမှာပေါ့လေ။ ဒီလိုစစ်သားတွေဟာ အထူးသဖြင့် Lieutenant William Calleyတို့လို စစ်သားတွေဟာ အဲလိုဆင်ခြေပေးပြီးတော့ ထောင်ဒဏ်အပစ်ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်တာမရှိဘူးလား။
ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် ။. ။ မရှိဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Lieutenant William Calley ပေးလိုက်တဲ့အမိန့်က Illegal and immoral ဖြစ်နေလို့ ။ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ မညီတဲ့အမိန့်ပေါ့။ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ၂၅ ယောက်က အဲဒါကို ဆင်ခြေပေးပေမဲ့ မရပါဘူး။ မအောင်မြင်ဘူး။ အမေရိကန်စစ်တပ်တင်မက တခြား Standard Army, Professional Army တွေမှာ ဒီကျင့်ဝတ်အားလုံးရှိကြပါတယ်။
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ အဲတော့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ ညီတဲ့ အမိန့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ လေ့ကျင်သင်ယူကြရတယ်ဆိုတာတော့ ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် ပြောလို့သိရပါတယ် ။ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ တော်တော်လေးကို အနီးဆက်ဆံခဲ့ဘူးတဲ့ ဆရာမအနေနဲ့ကော မြန်မာစစ်တပ်မှာ ဒီလိုကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေကို အလေးပေးပြောလာတာတွေရှိလားခင်ဗျာ။ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်တပ်က တော်တော်လေး ဝေဖန်ခံရတယ်။ လူထု့ကလည်း ရွံ့မုန်းတာခံရတယ်ပေါ့။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်နဲ့ သင်တန်းတွေပေးတယ်။ နှီနှော်ဖလှယ်ပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ ညီတဲ့အမိန့်တို့ ဒီကိစ္စတွေနားလည်နိုင်ဖို့ဆိုတာက မြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်အထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိလဲခင်ဗျာ။
ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် ။. ။ သူတို့ရဲ့ Code of Conduct ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပါပါတယ်။ လက်နက်မရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုကို သေနတ်နဲ့ပစ်ရင်တော့ ဒါကတော့ ပြည်သူလူထု့ကို ကာကွယ်တယ်ပြောလို့မရဘူး။
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လက်ရှိအခြေနေနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးတွေနဲ့ ရင်းနှီးစွာ နှီးနှော်ဖလှယ်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် အနေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဘာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာ။
ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ် ။ ။ ကျမတို့စင်တာလာသွားတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေပေါ့နော်။ သူတို့က အရမ်းတော်တယ်။ ကြိုးစားတယ်။ ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လည်းချစ်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုးကနေ တကယ်လို့ ၁၉ ၈၈ ကလိုဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင် မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျမယ်။ နောက်ပြီးတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း လူဆိုး. လူရိုင်းဆိုပြီး အထင်ခံရမှာ ကျမအရမ်းစိတ်ပူပါတယ်။
ဦးသန်လွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ ဟုတျကဲ့ မင်ျဂလာပါခငျဗြာ။
ဒျေါမိမိဝငျးဘတျ ။ ။ မင်ျဂလာ့ပါရှငျ
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ က မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပတျသကျလို့ရှိရငျ စဈဖကျ အရပျဖကျဆိုငျရာ ကိစ်စတှကေို သငျတနျးတှပေေးခဲ့ နှီးနှျောဖလှယျပှဲတှလေုပျဆောငျပေးခဲ့သူဆိုတော့ အခုဗမာပွညျမှာဖွဈနတေဲ့အခွအေနကေ လောလောဆယျကတော့ စဈအာဏာသိမျးတာပေါ့နျော။ နောကျထပျဖွဈလာတဲ့အခွအေနကေဘာလဲဆိုတော့ လမျးမပျေါထှကျဆန်ဒပွသူတှနေဲ့ မွနျမာစဈတပျနဲ့ လုံခွုံရေးတှနေဲ့ ထိပျတိုကျတှရေ့မယျအခွအေနဖွေဈနပွေီ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဆိုလို့ရှိရငျ ၁၉၈၈ လိုအခြိနျတုံးက စဈတပျက ပဈခတျလို့ လမျးမပျေါမှာ လူတှသေကွေကွေတယျ။ သှေးထှကျသံယိုအကွီးကယျြဖွဈခဲ့တယျ။ အဲဒီအတှကျကွောငျ့ပဲ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ စဈတပျကို အားလုံးက ဝဖေနျကွတာတှရှေိတာပေါ့။ အဲဒီတော့ မွနျမာစဈတပျက အရာရှိကွီးတှကေော မွနျမာစဈတပျကိုကော အရမျးကို ရငျးနှီးကွှမျးဝငျမှုရှိတဲ့ အမရေိကနျတပျမတျောရဲ့အရာရှိဟောငျးတယောကျဖွဈတဲ့ ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ အနနေဲ့ အခုလကျရှိအခွအေနကေို ဘယျလိုမွငျလဲ။ ဒါမြိုးတှေ ပဈခတျမှုတှေ သှေးထှကျသံယိုမှုတှေ ပျေါလာလိမျ့မယျထငျလား။
ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ။. ။ ကမြကတော့ မဖွဈစခေငျြဘူး။ မဖွဈလညျး မဖွဈသငျ့ဘူး။ ကမြတို့စငျတာမှာသငျသှားတဲ့ ဗိုလျမှူးကွီးတှဟော အရမျးပဲတျောတယျ။ လူတျောလူကောငျးတှေ နောကျပွီး သူတို့တှဟော အရမျးလညျးကွိုးစားတယျ။ သူတို့တှဟော နောကျပွီးနိုငျငံတျောလညျး ခဈြကွတာတှရေ့တယျ။ အခုခြိနျမှာက ဒီလကျနကျမရှိတဲ့ ပွညျသူလူထုကို ပဈတယျဆိုလို့ရှိရငျ ကမ်ဘာကွီးက လကျမခံကွတော့ဘူး။ ကမြတို့ရဲ့ အမရေိကနျတငျမကပါဘူး ကမ်ဘာကွီးက Soldier လို့ပွောလိုကျလို့ရှိရငျ Standard Army, Professional Army Soldier ဆိုလို့ရှိရငျ အဲလိုမြိုး Code of Conduct က လုံးဝလုပျလို့မရဘူး။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ ဒါကငျြ့ဝတျနဲ့ညီရမယျပေါ့နျော ။ သတျမှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို ခြိုးဖောကျလို့မရဘူးပေါ့နျော။ ဒီလိုကိစ်စမြိုးနဲ့ပတျသကျလို့ရှိရငျ ဒါက အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာဆိုလို့ရှိရငျ စဈတပျမှာ ဒီလိုအကွောငျးအရာ ဒီလိုကငျြ့ဝတျတှေ နဲ့ ပတျသကျလို့ရှိရငျ ဘယျလိုသတျမှတျထားတာရှိလဲခငျဗြာ။ ပွညျသူနဲ့ဆကျဆံတဲ့ကိစ်စ၊ လုံခွုံရေးဆိုငျရာကိစ်စတှမှော စဈတပျက ဝငျရောကျစှကျဖကျမှုရှိနိုငျတဲ့ရှိလာတဲ့အခါမြိုးမှာ ဘယျလိုတှမြေား ကငျြ့ဝတျသိက်ခာတှရှေိလဲ။
ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ။. ။ ကမြတို့ကိုယျတိုငျကတော့ ကမြတို့ရဲ့ အမရေိကနျတပျမတျောက ပွညျထဲရေးထဲမှာ လုံးဝဝငျစှကျလို့မရဘူး။ လုံခွုံရေးနဲ့ပတျသကျလို့လိုအပျလာလို့ရှိရငျ ပထမဆုံးက ရဲပေါ့နျော။ ရဲမနိုငျလို့ရှိရငျ ကမြတို့မှာက National Guard ပွညျစောငျ့တပျ ဆိုတာရှိတယျ။ သူတို့တှကေ လူထုတှကေို ဘယျလိုအသအေခွားထိနျးနိုငျတယျဆိုတဲ့ Training ရလာတယျ။ ကမြတို့ စဈတပျကွတော့ အဲလိုမြိုးသငျထားတာမဟုတျဘူးလေ။ ဥပဒအေရလညျး ပွညျတှငျးထဲမှာ ဘာမှဝငျစှကျလို့မရဘူး။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ စဈတပျကနဝေငျစှကျမယျအစားကို ဒီရဲတပျဖှဲ့ကနပွေီး မနိုငျတဲ့ကိစ်စတှလေိုအပျတဲ့အခါကွရငျ National Guard လို့ချေါတဲ့ ပွညျနယျအရံတပျဖှဲ့တှနေဲ့ ထိနျးသိမျးပေးရတာပေါ့။ အဲလိုအခွအေနမြေိုးတှကေ ဘယျတုံးကဖွဈခဲ့လဲ။ အခုကနြျောတို့နောကျဆုံးကွားတာကတော့ ဒီဇနျနဝါရီလ ၆ ရကျတုံးကဆိုလိုရှိရငျ တျောတျောအကွမျးဖကျတဲ့ကိစ်စလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ ဆန်ဒပွတဲ့သူတှေ လှတျတျောထဲကို အတငျးဝငျပွေးတယျ။ ရဲတှအေနနေဲ့ ကိုယျကိုကိုယျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ပဲ တျောရုံတနျရုံခုခံပွီး နောကျဆုံး အလြှော့ပေးလိုကျလို့ ဝငျစီးခံလိုကျရတယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျးမှာတော့ National Guard Force မှာတှတေ့ယျ။ ဒါပွီးထူးထူးခွားခွားမဖွဈဘူးပေါ့။ ဒီ National Guard Force တှကေပဲ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ ဒီထကျပိုပွီးစှကျဖကျရတဲ့ သမိုငျးကွောငျးတှရှေိ့ခဲ့လား။
ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ။. ။ ဟုတျကဲ့ ဒါပမေဲ့ ဇနျနဝါရီ ၆ရကျနမှေ့ာတောငျမှပဲ သူတို့ရဲ့သနေတျမသုံးလိုကျဘူး။ အကွမျးဖကျဆန်ဒပွတဲ့သူတှကေို နညျးမြိုးစုံနဲ့ ပွီးအောငျလုပျလိုကျတယျ။ နောကျဆန်ဒပွမှုအကွီးဆုံးတခုက လော့ဈအိနျဂလြိမွို့မှာ ၁၉၉၂ခုလားမသိဘူး။ အဲဒီအခြိနျမှာလညျးပဲ အမရေိကနျစဈတပျက လုံးဝမပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကယျလီဖိုးနီးယား National Guard ဝငျပွီး ကူညီပေးတယျ။ အဲဒီမှာဆန်ဒပွတာက လူသိနျးကြျောနဲ့ ဆန်ဒပွတာ။ လူတယောကျပဲသသှေားတယျ။ စဈသားက သူကိုတိုကျခိုကျလို့ ခုခံလိုကျတာ။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ စဈတပျကတော့ပွညျတှငျးရေးကိစ်စတှမှော လမျးပျေါထှကျပွီး ဆန်ဒပွတာမှာ ထှကျပွီးစှကျဖကျတာမရှိဘူး။ ဒါပမေဲ့ အမရေိကနျတပျဖှဲ့တှမှော နိုငျငံတကာမှာရှိနကွေတော့ နိုငျငံတကာကိစ်စတှမှော ဆောငျရှကျရတာရှိတယျ။ ဟိုးတုံးက ဆိုရငျ ဗီယကျနမျတို့ ၊ နောကျပွီးတို့ ကိုရီးယားတို့ရှိတယျ။ အခုလတျတလောမှာဆိုရငျ အီရတျ တို့ အာဖဂနျနစ်စတနျတို့မှာရှိတယျ။ ဒီနရောမှာဆိုရငျ တခြို့သတငျးတှမှော ကွားရပါတယျ။ အမရေိကနျ မရိမျးတပျဖှဲ့တှကေ အရပျသားတှကေိုပဈလိုကျမိလို့အရေးယူခံရတဲ့ကိစ်စတှရှေိတယျ။ အဲလိုကိစ်စတှနေဲ့ပတျသကျလို့ အမရေိကနျတပျဖှဲ့တှကေ ပွညျတှငျးမှာတော့ ဝငျမစှကျဖူး၊ ပွညျပမှာတော့ အရပျဖကျပွညျသူတှကေိုပဈခတျတယျဆိုတဲ့ကိစ်စတှမှော ဒါတှနေဲ့ပတျသကျလို့ အထူးတလညျ တားမွဈခကျြတှရှေိလား၊ အရေးယူမှုတှရှေိလား။
ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ ။ ။ အရေးယူမှုတှရှေိတယျ။ သူတို့ Court Martial စဈခုံရုံးတငျခံရမယျ။ ထောငျကတြာတှလေညျး အမြားကွီးရှိတယျ။ ကမြမှတျမိတာ General Stanley A. McChrystal သူက အီရတျမှာ ၂ဝဝ၉ ခုနှဈထဲမှာ ။ အဲဒီမှာသူပွောတာက ပွညျသူလူထု့ကို အကာကှယျပေးရမယျတဲ့။ ကာကှယျမှ ထောကျခံလိမျ့မယျလို့ သူကအမွဲပွောတယျ။ လကျနကျမရှိတဲ့ ပွညျသူလူထု့ကို သတျတာက Immoral Unethical ကငျြ့ဝတျသိက်ခာမရှိတဲ့ အပွုအမူ လို့ ယူဆတယျ။ ကမြတို့တငျမဟုတျပါဘူး။ Standard Army , Professional Army ဆိုရငျ မပဈရဘူး။ စဈဆငျရေးတှလေုပျတဲ့အခါမှာ ပွညျသူလူထု့ရဲ့ ထောကျခံမှုမရဘူးဆိုရငျ ကမြတို့အတှကျ ပိုပွီးတော့ ခကျခဲတယျ။ အဲဒါနဲ့ပတျသကျလို့လညျးကမြတို့ရဲ့ Operation of Reason ပေါ့နျော။ ပွညျသူလူထုရဲ့ ထောကျခံမှု လေးစားမှု ယုံကွညျမှုက အရမျးလိုအပျတယျ။ နိုငျငံတှငျးသာမက အပွငျသှားလညျး အတူတူပဲ။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ အဲတော့ ဒျေါမီမီဝငျးဘတျပွောတဲ့သဘောကတော့ တကယျကို ကငျြ့ဝတျသိက်ခာနဲ့ ပွညျဝတဲ့စဈတပျတခုအနနေဲ့က လကျနကျမဲ့တဲ့ ပွညျသူတှကေို ပဈခတျမယျဆိုရငျ ကငျြ့ဝတျသိက်ခာကို ခြိုးဖောကျသလို လူထု့ထောကျခံမှုမရပဲနဲ့ စဈဆငျရေးတှမှော အောငျမွငျမှာမဟုတျဘူး။ အဆငျပွမှောမဟုတျဘူးဆိုတဲ့သဘောပွောတာပေါ့နျော။ အမရေိကနျစဈတပျအနနေဲ့ နိုငျငံရပျခွားကိစ်စတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး နာမညျပကျြလုပျခဲ့တာတှရှေိခဲ့တာပဲ။ ဒါတှနေဲ့ပတျသကျပွီး သင်ျခနျးစာယူစရာဘာတှဖွေဈခဲ့သလဲ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အမရေိကနျတပျဖှဲတှေ နဲ့ပတျသကျပွီး ရုပျရှငျတှမှောလညျး မွငျဖူးတာရှိခဲ့တယျ။ အဲဒါလေးတှပွေောပွပါလား။
ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ ။. ။ ကိုသနျးလှငျထှနျး ပွောတဲ့ဟာ Platoon လို့ထငျပါတယျ။ သငျခနျးစာအမြားကွီး။ ကမြတို့ ဗိုလျလောငျးဘဝကတညျးက အဲဒါကို သငျရပါတယျ။ The Mỹ Lai massacre ဆိုတာ ၁၉ ၆၈ခုနှဈမှာ Lieutenant Carry နဲ့သူတပျစုပေါ့နျော Mỹ Lai ဆိုတဲ့ကြေးရှာလေးကိုဝငျခဲ့တယျ။ အဲဒီကြေးရှာက သူပုနျကိုထောကျပံနတေယျကွားလို့ဝငျခဲ့တယျ။ သှားလိုကျတော့ ကြေးရှာက လကျနကျကိုငျတှမေဟုတျဘူး။ သာမနျလူတှပေဲ။ ဘာမှမတှခေါတော့ အဲဒီလူတှကေို သတျကော။ အဲဒီအခြိနျမှာ ရဟတျယာဉျက Lieutenant William Calley ကို ထောကျကူဖို့လာတာ။ အဲဒါကို တှသှေ့ားတဲ့အခါ Lieutenant William Calley မပဈအောငျ လိုကျတားတယျ။ မသတေဲ့သူတှကေို ကူညီပွီးတော့ တခွားနရောကို ရောကျအောကျ ကူညီပေးလိုကျတယျ။ ပွီးလညျး ပွီးရော Lieutenant William Calley ကိုသှားတိုငျလိုကျတယျ။ Lieutenant William Calley သူတပျသား ၂၅ ယောကျလုံး စဈခုံရုံးတငျထောငျကကြုနျတယျ။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ စဈခုံရုံးတငျတဲ့ကိစ်စပေါ့နျော ။ ဆငျခွပေေါ့။ စဈတပျဆိုတာအမိနျ့နဲ့လုပျခဲ့ကွတော့ ဆငျခွတှေေ အမိနျ့တှပွေောစရာရှိတယျလေ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီလိုစဈမွပွေငျ အရေးပျေါကိစ်စတှမှောဆိုလို့ရှိရငျ အောကျခွကေနလေိုကျနာပွီးတော့ ပဈဆိုလညျးပဈရမှာပေါ့လေ။ ဒီလိုစဈသားတှဟော အထူးသဖွငျ့ Lieutenant William Calleyတို့လို စဈသားတှဟော အဲလိုဆငျခွပေေးပွီးတော့ ထောငျဒဏျအပဈဒဏျကနေ လှတျမွောကျတာမရှိဘူးလား။
ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ ။. ။ မရှိဘူး။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ Lieutenant William Calley ပေးလိုကျတဲ့အမိနျ့က Illegal and immoral ဖွဈနလေို့ ။ ဥပဒနေဲ့မညီတဲ့ ကငျြ့ဝတျသိက်ခာနဲ့ မညီတဲ့အမိနျ့ပေါ့။ ပွဈမှုကြူးလှနျတဲ့ ၂၅ ယောကျက အဲဒါကို ဆငျခွပေေးပမေဲ့ မရပါဘူး။ မအောငျမွငျဘူး။ အမရေိကနျစဈတပျတငျမက တခွား Standard Army, Professional Army တှမှော ဒီကငျြ့ဝတျအားလုံးရှိကွပါတယျ။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ အဲတော့ ကငျြ့ဝတျသိက်ခာနဲ့ ညီတဲ့ အမိနျ့ဟုတျမဟုတျဆိုတာ လကေ့ငျြသငျယူကွရတယျဆိုတာတော့ ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ ပွောလို့သိရပါတယျ ။ မွနျမာစဈတပျနဲ့ တျောတျောလေးကို အနီးဆကျဆံခဲ့ဘူးတဲ့ ဆရာမအနနေဲ့ကော မွနျမာစဈတပျမှာ ဒီလိုကငျြ့ဝတျသိက်ခာတှကေို အလေးပေးပွောလာတာတှရှေိလားခငျဗြာ။ ဖွဈခဲ့တဲ့ကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့ စဈတပျက တျောတျောလေး ဝဖေနျခံရတယျ။ လူထု့ကလညျး ရှံ့မုနျးတာခံရတယျပေါ့။ ဒီနောကျပိုငျးမှာ အမရေိကနျနဲ့ သငျတနျးတှပေေးတယျ။ နှီနှျောဖလှယျပှဲတှလေုပျတယျဆိုတော့ ကငျြ့ဝတျသိက်ခာနဲ့ ညီတဲ့အမိနျ့တို့ ဒီကိစ်စတှနေားလညျနိုငျဖို့ဆိုတာက မွနျမာစဈတပျထဲမှာ ဘယျလောကျအထိ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ရှိလဲခငျဗြာ။
ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ ။. ။ သူတို့ရဲ့ Code of Conduct ကိုကွညျ့လိုကျလို့ရှိရငျတော့ပါပါတယျ။ လကျနကျမရှိတဲ့ ပွညျသူလူထုကို သနေတျနဲ့ပဈရငျတော့ ဒါကတော့ ပွညျသူလူထု့ကို ကာကှယျတယျပွောလို့မရဘူး။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ ဟုတျကဲ့ခငျဗြ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျခငျဗြာ။ လကျရှိအခွနေနေဲ့ပတျသကျလို့ မွနျမာနိုငျငံက စဈဖကျဆိုငျရာ အရာရှိကွီးတှနေဲ့ ရငျးနှီးစှာ နှီးနှျောဖလှယျပှဲတှပွေုလုပျခဲ့တဲ့ ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ အနနေဲ့ ထူးထူးခွားခွား ဘာမြားပွောခငျြပါလဲခငျဗြာ။
ဒျေါမီမီဝငျးဘတျ ။ ။ ကမြတို့စငျတာလာသှားတဲ့ ဗိုလျမှူးကွီးတှပေေါ့နျော။ သူတို့က အရမျးတျောတယျ။ ကွိုးစားတယျ။ ကိုယျနိုငျငံကိုယျလညျးခဈြတယျ။ အဲဒီလိုမြိုးကနေ တကယျလို့ ၁၉ ၈၈ ကလိုဖွဈသှားခဲ့လို့ရှိရငျ မွနျမာတပျမတျောရဲ့ဂုဏျသိက်ခာကမြယျ။ နောကျပွီးတော့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ စဈတပျအသိုငျးအဝိုငျးမှာလညျး လူဆိုး. လူရိုငျးဆိုပွီး အထငျခံရမှာ ကမြအရမျးစိတျပူပါတယျ။
ဦးသနျလှငျထှနျး ။ ။ ဟုတျကဲ့ခငျဗြ။ကြေးဇူးတငျပါတယျ။